စပ်ဆေးရောင်းချသူများနှင့် အွန်လိုင်းတွင် သန္ဓေဖျက်ချဆေး ရောင်းသူများကို အမျိုးသားဆေးဝါး ဥ - Yangon Media Group
စပ် ဆေးရောင်းချသူများနှင့်အွန်လိုင်းတွင် သန္ဓေဖျက်ချဆေးရောင်းသူများကို အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေ ဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) မှ သိရသည်။
စပ်ဆေးများတွင် မလိုအပ် သောဆေးများပါသဖြင့် ဆေးမတိုး တော့ခြင်း၊ ဆေးများ၏ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ခံစားရခြင်းများအပြင် အချို့စပ်ဆေးများတွင် ရက်လွန် ဆေးများပါထည့်ပေးသဖြင့် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသောကြောင့် အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က UMFCCI တွင် ပြုလုပ်သော ”ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အသိပညာများအားရှင်းလင်းဟောပြောပွဲ”အပြီးတွင် (FDA) မှ ညွှန်ကြား ရေးမှူး(ဆေးဝါးဌာနခွဲ) ဒေါက်တာသိင်္ဂီဇင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးအား ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဆေးဆိုင်တွေကို လိုက်စစ်တယ်။ အခုကပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်တိုင်ကြားတဲ့ အဆင့်ရောက်လာပြီ။ အဲဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ အမျှစပ်ဆေး လည်းပျောက်သွားမှာပါ။ စပ် ဆေးမိရင်တော့ လိုင်စင်သုံးလ ပိတ်တာတော့ရှိတယ်။။ စပ်ဆေးကတော့ ၂ဝ လောက်ပဲရှိတယ်။လိုင်စင်သိမ်းတာကိုး။ စပ်ဆေးရဲ့ အန္တရာယ်ကကျတော့ မလိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေသောက်တဲ့အတွက် ဆေးယဉ်ပါးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဆေးမတိုးတော့တာတွေ ရှိပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ သောက်ရ တော့ ပိုက်ဆံကုန်တယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ကျောက်ကပ်ထိမယ်။ အသည်းထိမယ်”ဟု ဒေါက်တာသိင်္ဂီဇင်ကပြောသည်။
ထို့အပြင် အွန်လိုင်းပေါ်မှ တရားမဝင်ဆေးဝါးများ၊ သန္ဓေဖျက် ချဆေးများရောင်းချမှုကိုလည်း ဥပဒေ ဖြင့် အရေးယူမည်ဖြစ်သည်။ ”အွန်လိုင်းမှာကျတော့ ဘယ် လိုဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့ သန္ဓေဖျက်ချဆေးတို့ ဘာတို့ရောင်းတာ နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီဘက်ကနေပြီး တော့နှီးနွှယ်ဌာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီး တော့ အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ နောက်လည်းအော်ပရေးရှင်းတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အွန်လိုင်းကိစ္စက။ အွန်လိုင်းနဲ့ကျတော့မှတ် ပုံတင်မရှိဘူး၊ တရားမဝင်ဆေးဝါးဆိုရင် ပုဒ်မ-၁၈နဲ့အရေးယူနိုင်ပါတယ်။ လိုင်စင်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အရေးယူနိုင်တယ်။ အမျိုးသား ဆေးဝါးဥပဒေရှိတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေပါ တားမြစ်ချက်များကို ချိုးဖောက် ပါက ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ ခုနစ်နှစ်အထိ အပြစ်ပေးအ ရေးယူခံရနိုင်ကြောင်း FDA မှ သိရသည်။
''ငါက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘယ်ဟာရဲ့ သံတမန်တာဝန် ထမ်းဆောင်ထားတယ် ဆိုပြီးတော့ ဂုဏ်ယူတယ်'' မိုရီဆာကီဝင?
Express ကားတွင် အံဝှက်ပြုလုပ်၍ တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသည့် သစ်များ ရေပူ အမြဲတမ်း စစ်ဆေးရေးစခန်း ပူး??
ပြည်သူရွေးချယ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်ရေးအတွက် ပြည်သူ ၄ဝဝ ခန့် မကွေးမြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖေ??